Iintlawulo zeBluetooth zivula njani imida emitsha | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 3, 2021 Lwesine, Disemba 2, 2021 Sesie Bonsi
Phantse wonke umntu uyoyika ukukhuphela enye i-app njengoko behlala phantsi kwisidlo sangokuhlwa kwindawo yokutyela.
Njengoko i-Covid-19 iqhuba imfuno yoku-odola ngaphandle koqhagamshelwano kunye neentlawulo, ukudinwa kwe-app kwaba luphawu lwesibini. Itekhnoloji yeBluetooth isetelwe ukuba ilungelelanise le ntengiselwano yezemali ngokuvumela iintlawulo ezingachukunyiswanga kuluhlu olude, ukusebenzisa ii -apps ezikhoyo ukwenza oko. Uphononongo lwakutsha nje luchaze indlela ubhubhane okhawulezise ngayo ukwamkelwa kwetekhnoloji yentlawulo yedijithali.
Abantu aba-4 kwabalishumi base-US batshintshele kumakhadi angaqhagamshelaniyo okanye kwi-wallet ephathwayo njengeyona ndlela yabo yokuhlawula ukusukela oko kwabetha i-Covid-10.
I-PaymentsSource kunye neBhanki yaseMelika
Kodwa itekhnoloji yeBluetooth ilinganisa njani ngokuchasene nenkqubela phambili kwezinye iitekhnoloji zentlawulo ezingaqhagamshelwanga njengeekhowudi zeQR okanye unxibelelwano olukufutshane nentsimi (NFC)?
Ilula: Ukuxhotyiswa kwabathengi. Isini, umvuzo, kunye noluntu zonke zinefuthe kwindlela umthengi azimisele ngayo ukusebenzisa itekhnoloji yokuhlawula ngeselfowuni. Kodwa njengoko wonke umntu enokufikelela kwiBluetooth, ibonelela ngamathuba athembisayo eendlela ezahlukeneyo zokuhlawula kwaye inamandla okufikelela kubantu abohlukeneyo. Nantsi indlela iBluetooth evula ngayo imida emitsha yokubandakanywa kwezemali.
Idemokhrasi yeeNtlawulo zokuSebenza ngaphandle koqhagamshelwano
I-Covid-19 itshintshe kakhulu isimo sengqondo sabathengi malunga neentlawulo ezingaqhagamshelwanga njengokunxibelelana ngokomzimba kwiindawo zentengiso (POS) yaba yimfuneko. Kwaye akukho kubuya ngamva - i ukwamkelwa okukhawulezileyo yetekhnoloji yentlawulo yedijithali ilapha ukuhlala.
Makhe sithathe imeko kunye ne ukunqongophala kweemicrochips esele ichaphazele kanobom unikezelo. Kuthetha ukuba amakhadi aya kunyamalala phambi kokuba imali kwaye, emva koko, oko kuya kuba nefuthe elibi ekufikeleleni kwabantu kwiiakhawunti zebhanki. Ke ngoko, kukho ungxamiseko lokwenyani lokuphucula iinkqubo zentlawulo phambi kokuba oku kwenzeke.
Emva koko, kunye ne-cryptocurrency, kukho i-dichotomy engaqhelekanga. Sinexabiso eligcinwe ngokwedijithali lemali, kodwa zonke ezi tshintshiselwano ze-crypto kunye nezipaji zisasebenzisa kwaye zikhuphe amakhadi. I-tech emva kwale mali yedijithali, ngoko kubonakala kungaqondakali ukuba akukho ndlela yokwenza iintlawulo zedijithali. Ngaba yindleko? Ukuphazamiseka? Okanye phantsi ekungathembani?
Ngelixa iziko lezemali lihlala lijonge iindlela zokusebenzisa iinkonzo zabarhwebi, azibonakali zifumana izandla zabo kwii-terminals. Kulapho ezinye iindlela zifuneka khona ukuhambisa amava akhuthazayo ekuqaleni.
Bubuchwephesha beBluetooth obunika abarhwebi kunye nabathengi ukufikeleleka, ukuguquguquka, kunye nokuzimela ngendlela abakhetha ngayo ukutshintshiselana ngexabiso omnye nomnye. Nakuphi na ukutya okanye amava okuthengisa anokwenziwa lula njengoko kungekho mfuneko yokukhuphela ii -apps ezahlukeneyo okanye uskene ikhowudi ye-QR. Ngokunciphisa ukruthakruthwano, la mava abe lula, aquka, kwaye afikeleleke kumntu wonke.
Ubiquity Kuzo zonke Iindidi ezahlukeneyo zeeHandsets
Xa kujongwa iimarike ezikhulayo kunye noluntu olusezantsi lwezoqoqosho, kuyacaca ukuba bezikhutshiwe ngokwembali kumaziko ezemali. Oku kungenxa yokuba itekhnoloji ye-NFC, efana ne-Apple Pay, ayixhaswanga kuzo zonke izixhobo kwaye ayinguye wonke umntu onokuthenga i-iPhone. Oku kunciphisa ukuqhubela phambili kunye nokugcina iimpawu ezithile kunye neenkonzo zomgangatho ophezulu kunye nokufikelela kwii-electronics ezithile.
Nokuba iikhowudi ze-QR ezibonakala zikho yonke indawo zifuna ikhamera ekumgangatho ophezulu kwaye ayizizo zonke ii-handsets zixhotyiswe ngalo msebenzi. Iikhowudi ze-QR azinikezi sisombululo sinokwehla: Abathengi kusafuneka babe kufutshane nekhowudi ukuze intengiselwano yenzeke. Oku kunokuba yiphetshana elibonakalayo okanye ihardware esebenza njengomlamli phakathi kwecashier, umrhwebi, kunye nomthengi.
Kwicala eliphezulu, kumashumi amabini eminyaka edlulileyo, iBluetooth yenziwe yasebenza kuzo zonke izixhobo eziphathwayo, kubandakanya nezixhobo ezikumgangatho ophantsi. Kwaye oko kuza nethuba lokuqhuba utshintshiselwano lwezemali ngeBluetooth, ukuvumela abasebenzisi ukuba basebenzise itekhnoloji ebikade ingafikeleleki. Oku kulingana nokuxhotyiswa kwabathengi njengoko i-hardware isusiwe ngokupheleleyo kwaye intengiselwano ibandakanya i-POS yomthengisi kunye nomthengi.
IBluetooth Izisa Amathuba amaninzi kwabasetyhini
Amadoda abonakalisa umdla ngakumbi kunabafazi usebenzisa isipaji esiphathwayo kwi-intanethi kunye nokuthengwa kwevenkile kodwa malunga ne-60% yezigqibo zentlawulo zenziwe ngabasetyhini. Apha kulele uqhagamshelo kunye nethuba elikhulu labasetyhini ukuba babambe amandla obuchwepheshe obutsha, obuvelayo.
Uyilo lwetekhnoloji yokuhlawula kunye ne-UX zihlala ziyilwe ngamadoda kwaye, ngokujonga ekudaleni ubutyebi okanye i-cryptocurrency, kuyacaca ukuba abafazi bashiywe ngaphandle. Iintlawulo zeBluetooth zibonelela ngokubandakanywa kwabasetyhini abanamava alula, angenamkhuhlane, kwaye aluncedo ngakumbi ekuphumeni.
NjengoMseki weqonga letekhnoloji yezemali evumela amava okuhlawula angenamsebenzi, kwakubalulekile ukuba ube nabasetyhini engqondweni kwizigqibo ze-UX, ngakumbi kwiimarike ezikhulayo. Sikwavakalelwa kukuba kubaluleke kakhulu ukuqesha abalawuli ababhinqileyo ngokudibanisa nothungelwano kushishino lwentlawulo efana Uthungelwano lweNtlawulo yabasetyhini baseYurophu*.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ipesenti yezivumelwano zemali-mali eziye zaya kubaseki basetyhini phantse kabini. Kwaye ezinye zezona apps zilungileyo zikhoyo mhlawumbi ziyilwe ngabasetyhini okanye zinabafazi kwiindima zomphathi wentlawulo. Cinga ngeBumble, Eventbrite, kunye nePepTalkHer. Ngale nto engqondweni, abafazi kufuneka babe phambili kwi-Bluetooth revolution.
Ukuqhubela phambili kwamva nje ngeBluetooth kunokunxibelelana ukusuka kwisixhobo sePOS somthengisi, iterminal yehardware, okanye isoftwe kwisicelo ngokuthe ngqo. Ingcinga yokuba i-app esele ikhona yebhanki ephathwayo inokuxhaswa ukuba isebenze ngeBluetooth, idityaniswe nendalo yeBluetooth yendawo yonke, inika amathuba abo basuka kuluhlu lweemvelaphi zentlalo noqoqosho, izini kunye norhwebo.
*Isibhengezo: UMongameli we-EWPN uhlala ebhodini eBleu.
tags: intlawulo yeapilesiblueibluetoothiintlawulo zebluetoothlicwecweIintlawulo ezingenantoi-covid-19cryptocurrencyintlawulo yedijithaliitekhnoloji yentlawulo yedijithaliiimarike ezikhulayoInethiwekhi yentlawulo yabasetyhini baseYurophuiteknoloji yezemalifintechUkuqhubekeka kwentlawuloiintlawulo mobileIsipaji esiphathwayokufutshane nonxibelelwano lwentsimiNFCbhubhaneUkulungiswa kwentlawuloumthombo wentlawuloposQR Codeuxizigqibo ux
U-Sesie ligqwetha elinolwazi oluphezulu kunye nolwazi kwiinkalo zobugcisa beselula kunye neziseko ezingundoqo ezibandakanya kodwa zingaphelelanga kwimimiselo yonxibelelwano lwehlabathi jikelele, iinkqubo zentlawulo yeselula kunye nemimiselo yezemali, i-m-commerce, kunye nemimiselo yorhwebo lwentlalo. Umdlali weqela elisebenzayo kunye nokukhuthazayo kunye nezakhono eziphezulu zokuhlalutya ishishini kunye nokukwazi ukuhlalutya kunye nokuphucula iinkqubo zoshishino kwiteknoloji yeselula. Ubambe iipatent ezimbini kwitekhnoloji yokuhlawula. I-Visa Technology Partner, kunye neFIS Fintech Accelerator Cohort 1 umseki. Ubuchwephesha obusebenzayo nobukhutheleyo obunemvelaphi eyahlukileyo kwezoshishino, ishishini, umthetho, kunye nolwakhiwo lombutho.
I-Clearbit: Ukusebenzisa ubukrelekrele bexesha lokwenyani ukwenza ubuqu kunye nokuphucula iWebhusayithi yakho yeB2B